किन कम्युनिष्टहरू कांग्रेस बन्छन् ? – Sthaniya Patra
By स्थानीय पत्र	 Last updated Oct 11, 2021
भारतीय कांग्रेस प्रवेश गरेका कम्युनिष्ट नेता कन्हैया कुमार राहुल गान्धीको साथमा (दायाँ)
केही दिनअघि भारतका चर्चित कम्युनिष्ट युवा नेता कन्हैया कुमार, भारतीय कंग्रेसमा प्रवेश गर्ने हल्ला चल्यो । त्यो खबर केही दिनमै सत्य सावित भयो । उदीयमान कम्युनिष्ट नेता भनी चर्चा कमाएको व्यक्ति एकाएक कंग्रेस प्रवेश गर्दा मानिसहरूले आश्चर्य माने ।
केही वर्षअघि एमालेसँग माओवादीले पार्टी एकता गर्ने हल्ला आयो । त्यो हल्ला पनि केही समयपछि सत्य सावित भयो । ‘अर्को कांग्रेस’ भनी आफैंले उपमा दिएको एमालेसँग माओवादीको पार्टी एकता हुँदा मानिसहरूले उस्तै आश्चर्य माने ।
केही समयअघि अदालतको आदेशबाट एमाले-माओवादी एकता टुटाइयो । पार्टी विभाजन हुँदा बादल नामका ‘ब्राण्डेड’ माओवादी नेता आफ्नो ‘ब्राण्ड’ छोडेर एमाले प्रवेश गरे । आज उनी एमालेका नेता भएका छन् । यो परिघटनालाई पनि मानिसहरूले अनौठो मानेका छन् ।
किन कम्युनिष्टहरू कांग्रेस बन्छन् ? यो प्रश्न त्यति महत्वको त होइन । किनकि कम्युनिष्ट र कांग्रेस बीचको भेद केवल उल्टो-सुल्टोको भेद हो । कुनै कांग्रेस (पूँजीवादी) जब टाउकाले टेकेर उभिन्छ, तब त्यही कम्युनिष्ट हो । कुनै कम्युनिष्ट जब खुट्टाको बलमा उभिन्छ, तब त्यही कांग्रेस हो । त्यसैले कम्युनिष्ट, कांग्रेसमा लागेको वा कांग्रेस, कम्युनिष्टमा लागेको विषय त्यति अनौठो र महत्वको विषय होइन ।
तर नेपालमा कम्युनिष्टहरूलाई ‘खास प्राणी’ मान्नेहरूको ठूलो जमात छ । धेरै नेपालीलाई कम्युनिष्ट भनेको गरीबको भलो गर्ने पार्टी हो भन्ने भ्रम छ । कम्युनिष्ट नेता भनेका अडान र आदर्शमा पक्का हुन्छन् भन्ने बुझाइ छ । त्यसैले कुनै कम्युनिष्ट नेता कांग्रेस प्रवेश गरेको विषय यहाँ सार्वजनिक सरोकारको विषय भइदिन्छ । यस्ता विषयमा गरिएको टीकाटिप्पणी पनि रुचि र चासोको विषय बन्दछ ।
काम, क्रोध, लोभ, मोह र अहंकार जस्ता गुणहरूको कुल जोड नै मानिस हो । बुद्ध पुरुष -व्यक्ति) बाहेक यो जगतमा सबै मानिस स्वार्थी र अहंकारी हुन्छन् । यही कारण मानव समाजलाई नियम चाहिन्छ । हरेक मानिस साझा नियमको मातहत रहन जरूरी हुन्छ ।
तर त्यो नियमका सम्बन्धमा कम्युनिष्ट र कांग्रेसले जे भन्छन् त्यो मानव जाति तथा सिंगो प्रकृतिलाई हानि गर्ने खालको छ । त्यसैले कोही कांग्रेस वा कम्युनिष्ट भएर केही फरक पर्दैन । उदारवादी वा साम्यवादी दुवैको जमात उस्तै स्वार्थी र अहंकारी मानिसहरूको जमात हो । यी दुवै अहंकार प्रेरित विचारधारा हुन् । त्यसैले, कांग्रेस हुनु जति गलत हो, कम्युनिष्ट हुनु त्यति नै गलत ।
मानिसभित्रको अहंकारले नै उसलाई टाउकोले टेकेर उभिने बनाउँछ । अहंकार मध्यमार्गी हुनै सक्दैन । यसले जहिल्यै ‘वार कि पार’ को भाषामा सोच्दछ । दुई अतिमध्ये एक चुन्छ । जस्तो कि, भोग वा त्याग, निन्दा वा प्रशंसा, स्वपीडा वा परपीडा, संघर्ष वा सम्झौता, मोह वा घृणा, आत्मसंघर्ष वा आत्महत्या आदि ।
हिजो हजारौं युवालाई संघर्षका लागि उक्साउने प्रचण्ड, आज आत्महत्या गर्ने कुरा गर्दैछन् । हिजो सिद्धान्तनिष्ठ नेताको उपमा पाएका मोहन वैद्य आज राजासँग मिल्न सकिने कुरा गर्दैछन् । हिजो जनयुद्धका ‘शिल्पकार’ मानिएका बादल आज ‘जबज’ को प्रवक्ता भएका छन् । हिजो प्रचण्ड भन्दा गतिलो क्रान्तिकारी बन्छु भन्ने विप्लव आज ओलीसँग सम्झौता गर्दैछन् । यो सब अहंकारको खेल हो ।
जब कुनै व्यक्ति निजी धनको विरोध गर्छ, त्याग र बलिदानको कुरा गर्छ, संघर्ष र क्रान्तिको कुरा गर्छ, वर्ग दुश्मन र वर्ग मित्रको कुरा गर्छ, तब यो बुझ्नुपर्दछ कि ऊ टाउकोले टेकेर उभिने प्रयत्न गरिरहेको छ । अर्थात् व्यक्तिको कम्युनिष्टकरण भइरहेको छ ।
जब सोही व्यक्ति सम्झौता, सत्ता, पद र वैयक्तिक योगदानको कुरा गर्न थाल्छ, चुनावमुखी हुन्छ, निजी धनको जोहोमा लाग्छ, तब यो बुझ्नुपर्दछ कि त्यो व्यक्ति सुल्टो उभिने प्रयत्न गरिरहेको छ । अर्थात्, व्यक्तिको कांग्रेसीकरण भइरहेको छ ।
यो प्रक्रिया दोहोरो नै हुन्छ । जब अमूक कम्युनिष्टको अहंकार पूरा हुँदैन, तब ऊ सुल्टो उभिन तयार हुन्छ, अर्थात् कांग्रेस बन्छ । जब अमूक कांग्रेसीको अहंकार पूरा हुँदैन, तब ऊ टाउकाले टेकेर उभिन तयार हुन्छ, अर्थात् कम्युनिष्ट पार्टीमा लाग्छ ।
कम्युनिष्ट हुनु भनेको अहंकारका दुई अतिमध्ये एउटा अतिमा जिउने प्रयत्न हो । कांग्रेस हुनु भनेको अर्को अतिमा जिउने प्रयत्न हो । जसरी भए पनि अहंकारले आफ्नो तुष्टीकरण खोज्छ । त्यो पूरा हुन्जेल एउटा अति चुन्छ । असफल बन्दै गएपछि त्यसको ठीक विपरीत अति चुन्दछ । हाम्रा नेताहरू प्रचण्ड, वैद्य, विप्लव, बादल, ओली, माधव लगायत सबैको नियति यही हो ।
अहंकारले परपीडा मात्र सोच्दैन । यो आत्मघातका लागि पनि राजी हुन्छ । त्यसैले प्रचण्ड जस्ता व्यक्तिले आत्महत्याको कुरा गर्नु अनौठो होइन । प्रचण्डको जीवन दृष्टिकोणका दुई वटै नियति हुन्छन्- आत्मसंघर्ष वा आत्महत्या । यो तथ्य अहिले उनकै मुखबाट सुन्न पाइएको छ ।
तर हामी त सोच्दछौं- अहंकार भनेको नकारात्मक मात्र हुन्छ । परपीडक मात्र हुन्छ । सकारात्मक अहंकार त राम्रो कुरा हो । कोही त्यागी बन्छ भने त राम्रो कुरा हो । तर यो सोच गलत हो । सकारको अहंकार पनि अति नै हो । त्यागको अहंकार पनि अति नै हो ।
भोग र त्याग परिपूरक छन् । एकआपसमा रूपान्तरण हुन्छन् । त्यागी अरू कतैबाट पैदा हुने होइन, त्यो भोगीकै उल्टो रूप हो । भोगवाला नकारको अहंकारबाटै त्यागवाला सकारको अहंकार पैदा हुने हो । भोग होस् कि त्याग, अहंकारको आधारभूत गुण नै यो हो कि, यसले जहिल्यै र जसरी भए पनि आफूलाई केन्द्रमा र अरूलाई परिधिमा राख्ने प्रयत्न गर्दछ । यो पूरा भएन भने भोगी त्यागीमा फेरिन्छ, त्यागी भोगीमा ।
प्रचण्ड, जसले पार्टीमा एकछत्र भोग गरेका थिए । विश्व क्रान्तिको नायक बन्छु भन्थे । तर आफैंले तथानाम गाली गरेका ओली जस्ता मामुली पात्रका वरिपरि नाँच्नुपर्ने अवस्था आयो । यस्ता पात्रको अपमान र तिरस्कार भोग्नुपर्ने अवस्था आयो । यो उनका लागि असहनीय भयो ।
यही असहनीय अवस्थाले नै उनलाई आत्महत्यासम्मको सोचमा पुर्‍याएको हो । तर आत्महत्या गर्छु भन्ने उनको त्यागी अभिव्यक्ति निष्कण्टक भोग गर्न नपाउँदाको कुण्ठा र छट्पटी नै हो । यो प्रचण्डभित्रको भोगवृत्तिले टाउकाको बलमा खडा हुने प्रयत्न गरेको हो । सारमा यो प्रचण्डभित्रको अहंकारले जसरी भए पनि आफूलाई केन्द्रमा राख्न प्रयत्न गरेको हो । भोलि तिनै प्रचण्डलाई अलिकति भोगको अवसर पैदा हुने बित्तिकै उनी आत्महत्या होइन, आत्मसंघर्ष भन्न थाल्नेछन् ।
त्यसैले, अहंकार सकारात्मक होस् कि नकारात्मक, त्यो एउटै कुरा हो । जुन गलतै हुन्छ । तर सकारको अहंकारले हामीलाई झुक्याइदिन्छ । तब हामी त्यस्ता मान्छेलाई सिद्धान्तनिष्ठ, इमानदार आदि भनेर सम्मान गर्दछौं । वास्तविकतामा ती इमानदार हुँदैनन् । मात्र उनीहरूको भोगवृत्तिले शीर्षासन गरिरहेको हुन्छ । तब तिनीहरू त्यागी जस्ता देखिन्छन् । कुनै दिन यस्तो पनि आउँछ, त्याग वृत्ति सुल्टो खुट्टामा उभिन्छ, तब तिनीहरू भोगी भएर देखा पर्दछन् ।
प्रचण्ड मात्र होइन, कम्युनिष्ट/कांग्रेस सबैखाले नेताहरूको दैनिकी यसरी नै चलिरहेको छ । यिनीहरूको बोली र व्यवहारभित्र केही छ भने केवल पद (शक्ति) को लालसा छ । वास्तविकतामा यिनीहरू अहंकारका दास हुन् । अहंकारले नै यिनीहरूलाई घडीको पेण्डुलम जस्तै एउटा अतिबाट अर्को अतिमा हल्लाइरहेको छ । यिनीहरू जे-जे ‘लीला’ गर्छन्, त्यो केवल अहंकारको खेल हो ।
अहंकारबाट प्राप्त हुने फल दुःख र तनाव मात्र हो । हाम्रा नेताहरू, जो आफैं दुःख र तनावको जीवन बाँचिरहेका छन्, त्यस्ताबाट समाजमा खुशी पैदा हुन्छ भन्नु केवल भ्रम हो ।
माथिको नियम कन्हैया कुमारका सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ । यद्यपि माथि उल्लिखित नेपाली नेता र कन्हैया कुमारमा केही फरक छ । नेपाली नेताहरू वर्षौंदेखि आ-आफ्ना पार्टीमा सम्राट भई खाएका पात्र हुन् । तर कन्हैया कुमार उनको पार्टी भाकपामा त्यही हैसियतका नेता होइनन् ।
कन्हैया कुमार आफ्नो पार्टीका केन्द्रीय सदस्यसम्म थिएनन् । उनको पार्टी भारतका दर्जनौं कम्युनिष्ट घटकमध्येको एक हो । जो उदीयमान होइन, अस्ताउँदो अवस्थामा छ । जो खिइँदै अस्तित्व संकटको चरणमा पुगिसकेको छ । तर त्यहाँभित्र ‘संसार मेरै बुद्धिको वरिपरि घुम्छ’ भन्ने खालका वयोवृद्ध नेताहरूले वर्षौंदेखि राज गरिरहेका छन् । जसले उनलाई केन्द्रीय सदस्यसम्मको हैसियत दिन तयार थिएनन् ।
संसारमा के कस्ता परिवर्तन आए ? विज्ञानमा कस्तो परिवर्तन आयो ? यो कुरासँग बेखबर ती वयोवृद्ध नेताहरू आफू बाहेक अरूका कुरा सुन्न पनि चाहँदैनन् । यस्तो जडवत् संगठनभित्र उनी जस्तो प्रतिभावान युवा टिक्न मुश्किलै थियो ।
तर यसको अर्थ यो होइन कि उनी विशिष्ट प्रतिभा थिए । भारतका सबै कम्युनिष्ट घटकभित्र उनी जस्तै तर्क र भाषण गर्न जान्ने पात्रहरू एक से एक छन् । यसका बाबजूद केही संयोगजन्य घटनाले उनको व्यक्तित्वलाई चर्चित बनाइदियो ।
उनी जेएनयू विश्वविद्यालयको विद्यार्थी युनियनको अध्यक्ष भएकाले सत्ताविरोधी संघर्षमा उनको नाम र छवि चर्चित बन्यो । बीजेपीले उनीमाथि पटक-पटक गरेको दमनका कारण पनि बीजेपी विरोधीहरूले उनलाई चर्चित र लोकप्रिय बनाइदिए ।
जसले लोकप्रियता कमाउँछ, त्यसलाई जो-कोहीले उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्दछ । भारतको राजनीतिमा ‘सेलिब्रेटी’ लाई प्रयोग गर्ने चलन पुरानै हो । कांग्रेसले उनमा केही ‘दम’ देख्यो, जसलाई प्रयोग गरेर आफ्नो गुमेको शक्ति फिर्ता लिन सकिन्छ कि भनेर प्रयत्न गर्‍यो ।
भन्न त कन्हैयाले मुलुकको लोकतन्त्र जोगाउन आफू कांग्रेस बनेको भनेका छन् । तर वास्तविकतामा उनी कांग्रेसी पद र शक्तिको लोभमा फसेकै हुन् । उनी जस्तो युवाका लागि यतिबेलाको अभिभारा अर्कै हुन्थ्यो । पहिलो, राजनीतिको शास्त्रीय तरिकासँग सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्थ्यो । दोस्रो, आजको युग सुहाउँदो र आधुनिक विज्ञानको मार्गदर्शन अनुरूपको राजनीतिको ढाँचा तयार गर्न अनुसन्धानको बाटोमा लाग्नुपर्थ्यो।
तर उनीभित्र त्यति फराकिलो चेत थिएन । उनी पनि जडवत् कम्युनिष्टहरूका शास्त्रीय स्कुलिङ्ग भित्रै सोच्दथे । त्यसैले उनको सक्रियता पनि अहंकार प्रेरित सक्रियता थियो । यसको परिणाम यही भयो कि उनी एउटा अतिबाट अर्को अतिमा फसे ।
दलबदलु प्रवृत्ति राजनीतिक संकटकै अभिव्यक्ति हो । यस्तो संकट नेपाल र भारतमा मात्र सीमित छैन । पूरै विश्व अहिले वैचारिक/राजनीतिक संकट भोगिरहेको छ । शास्त्रीय विचारधाराहरूले जुन बाटोबाट मानव मुक्ति हुन्छ भनेका थिए, त्यो बाटोले उल्टो परिणाम दिएको छ ।
आज संकट राजनीतिक वृत्तमा मात्र सीमित छैन । आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय र प्राविधिक क्षेत्र पनि संकटग्रस्त छ । यसको जिम्मेवार यिनै कांग्रेस/कम्युनिष्ट जस्ता शास्त्रीय विचारधारा नै हुन् । तर आजका संकट समाधान गर्ने वैचारिक ल्याकत शास्त्रीय विचारधारासँग छैन । जसको परिणाम शास्त्रीय धाराका राजनीतिकर्मीहरू पेण्डुलम जस्तो दायाँ-बायाँ गरिरहेका छन् ।
आजको वैश्विक संकटको समाधान सम्भव छ । तर यो एउटै शर्तमा मात्र । यसका लागि ‘शास्त्रीय विज्ञान’ होइन, ‘आधुनिक विज्ञान’ पक्रिन जरूरी हुन्छ । विज्ञानको क्रान्ति बुझ्न जरूरी हुन्छ । ‘क्रान्तिकारी विज्ञान’ अनुसार राजनीतिको नयाँ ढाँचा कोर्न जरूरी हुन्छ ।
तर हाम्रा दल त सम्प्रदाय जस्ता भइसकेका छन् । कुनै नयाँ कुरा सुन्न चाहँदैनन् । पुरानै ढर्रामा रमाउन चाहन्छन् । आफूले जुन ‘शास्त्र’ मान्दै आएको हो, त्यसैको ‘पूजा’ गर्दछन् । जुन चिन्तकलाई मानी आएको हो, उसैलाई ‘देवता’ बनाएका छन् । त्यसमा यताउता गर्न तयार छैनन् ।
प्रायः सबै दलका प्रमुख नेता मठाधीश जस्ता भइसकेका छन् । तिनीहरूका दोस्रो र मध्यम दर्जाका नेता पण्डित जस्ता भएका छन् । स्थानीय नेता पुरोहित जस्ता भएका छन् । सदस्यहरू जजमान जस्ता भएका छन् । मठाधीशले जे भन्छ, त्यो पण्डित पुरोहित र जजमान, सबैलाई मान्य छ ।
यो बाहेक कहिलेकाहीं केही पण्डितहरू सम्प्रदाय परिवर्तन गर्दछन् । त्यो अरू कारणले होइन, ठूलो भाग खाने लोभले । तब केही पुरोहित र जजमानहरू यिनीहरूको पछि लाग्छन् ।
कम्युनिष्टहरूको टुटफुट वा कम्युनिष्ट पात्रहरू कांग्रेस प्रवेश गरेको घटनाको अर्थ योभन्दा गहिरो छैन । यिनीहरूको चरित्र अनुसार यो एकदमै स्वाभाविक पनि हो । किनकि चिन्तन नै अन्धविश्वासी भएपछि हुने नै यही हो ।
विश्व राजनीति यतिबेला पूरै अन्धविश्वासमा फसेको छ । यसलाई वैज्ञानिकीकरण गर्न धेरै ढिला भइसक्यो । यो काममा आजका सचेत युवाहरूको चासो जाग्नु जरूरी छ ।
जन्मदिनमा स्टेशनरी वितरण